I-China Carbide Rectangular Woodworking Reversible Knives enezimbobo ezi-2 zabakhiqizi nabaphakeli | Xinhua
Carbide kukanxande Woodworking imimese Reversible nge 2 Izimbobo
Imimese eguquguqukayo engunxande yeCarbide yenziwa ngemikhiqizo eluhlaza okusanhlamvu okusanhlamvu okuqinile nokumelana nokugqoka okuphezulu namandla okugoba. Le micu eqediwe icutshungulwa yi-CNC nemishini ekhethekile engaphansi kwenqubo yokukhiqiza yezinyathelo ezingama-27.
I-carbide eqinile eyi-K08 yenza imiphetho ibe eqinile kakhulu, ikunikeze umuzwa ongcono nokusika okuqinile.
Amakhona wommese wokufaka oguqukayo abukhali kakhulu ngaphandle kwe-radius, ukukhetha okungcono kakhulu kokuguqula amaphrofayli aqondile futhi acishe abe ngama-90 ° ngaphakathi kwamakhona.
Ama-blade anezinhlangothi ezi-2 enza izinkinobho zokusika zisheshe, ezikunciphisa kakhulu isikhathi.
Yenza ukusika okuhlala isikhathi eside, okushelelayo ezihlahleni ezinzima kakhulu. Isetshenziselwa ukusika izinkuni ezisikiwe zokugunda / zokugunda, ama-groovers, amakhanda okusika ama-helical planer, nezinye izinhlelo zokusebenza zezinkuni.
Ubude (mm) Ububanzi (mm) Ubukhulu (mm) I-engeli Enqenqemeni "a" Ukusika Imiphetho
29 12 1.5 35 ° 2 Umngcele
30 12 1.5 35 ° 2 Umngcele
30 12 2.5 35 ° 2 Umngcele
40 12 1.5 35 ° 2 Umngcele
49.5 12 1.5 35 ° 2 Umngcele
50 12 1.5 35 ° 2 Umngcele
59.5 12 1.5 35 ° 2 Umngcele
60 12 1.5 35 ° 2 Umngcele
Langaphambilini I-Carbide Radius Scraper ye-Edgebander
Olandelayo: Carbide Imimese Ebuyiselwayo ngeRadius Corner